आज घट्यो सुन-चाँदीको भाउ, तोलाको कति ?
काठमाडौं । आज (बिहीबार) सुनको भाउ ह्वात्तै घटेको छ। सोमबार र बुधबार क्रमश २-२ सय रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ आज भने ४ सय रुपैयाँले घटेको हो। आज बजारमा छापावाल सुन प्रतितोला ६५ हजार रुपैयाँ र तेजावी सुन ६४ हजार ७ सय…
काठमाडौं । आज (बिहीबार) युके पाउण्ड बाहेक सबै देशको भाउ घटेको छ । आज अमेरीकी डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ। युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ६३…
काठमाडौं। धितोपत्र बजारमा नेप्से परिसूचकको उकालो यात्रा बुधबार पनि जारी रह्यो । मङ्गलबार ३.३९ अङ्कले उकालो लागेको शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार ६.२० अङ्कले वृद्धि भई एक हजार २६५.५७ मा पुगेको छ । त्यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक १.१० अङ्कले बढेर…
चितवन। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले गोर्खा ब्रुअरीलाई अन्तिम अन्तःशुल्क निर्धारण आदेश जारी गरेको छ। कार्यालयले दुई आर्थिक वर्षको तिर्न बाँकी रहेको ८७ करोड १४ लाख ९७ हजार ५७८ सात दिनभित्र दाखिला गर्न आदेश जारी गरेको हो। …
आज झन् बढ्यो सुन-चाँदीको भाउ, तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाडौं । आज (बुधबार) सुनको भाउ झन् उकालो लागेको छ। सोमबार २ सय रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ आजपनि २ सय रुपैयाँले बढेको हो। आज बजारमा छापावाल सुन प्रतितोला ६५ हजार ४ सय रुपैयाँ र तेजावी सुन ६५ हजार १ सय…
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सिईओको स्वच्छता परीक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ)को स्वच्छता परीक्षण आफैंले गर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सिईओको स्वच्छता परिक्षण गरी मौद्रिक नीति तय गरिएको बताएका हुन्।…
सञ्चिता घिमिरे काठमाडौं । चार वर्ष अघि विस्तारको काम शुरु भएको त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा सडक चार महीनामा सम्पन्न हुने भएको छ। सडक क्षेत्रमा परेका घर भत्काएपछि स्थानीयवासीले विरोध गरेपछि लामो समयसम्म सडक निर्माण अवरुद्ध भएको थियो। अहिलेको गतिमा काम भए निर्माण सम्पन्न…
काठमाडाैं। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई तिव्रता दिइएको छ। रेलमार्ग निर्माण शुरु गर्नुभन्दा पहिले आवश्यक जग्गा निर्धारण गरी ‘साइड क्लियरेन्स’ गर्ने लक्ष्यसाथ मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको हो। जिल्ला प्रशासन…
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिईओ छनोट राष्ट्र बैंकले गर्ने
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ)को छनौट आफैंले गर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सिईओ छनोट राष्ट्र बैंक आफैले गर्ने गरी मौद्रिक नीति तय गरिएको बताएका…